Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2010 (3)
Q and A October 2010 (3)
1. Hydrocoele က မနာဘူးလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်
2. လိင်တံ သေးနေလို့
3. ဗိုက်ဆာရင် ခြေတွေလက်တွေပါ တုန်လာတယ်
4. ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ကို
5. အပျို စစ်-မစစ်နဲ့ ဆိုင်ပါသလား
6. တားဆေးကဒ်က ဆေးကို ၄ လုံး
Q: ကျွန်တော် ဆီးပူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီး ခဏခဏ သွားပါတယ်။ ခါး အထက် နေရာ နားက နာပါတယ်။ Prostitute နဲ့ Oral sex လုပ်မိပါတယ်။ Condom နဲ့တော့ ဆက်ဆံပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆရာဝန် တယောက်နဲ့ ပြပါတယ်။ Antibiotics စားဆေးရော ထိုးဆေးပါ ပေးပါတယ်။ ဆီးပူနေတာရယ် ဆီးခဏခဏ သွားနေတာက ကောင်းသွားတယ်။ Right testis, right groin က နာနေပါတယ်။ ဆီး စစ်တော့လည်း Gonorrhea, Syphilis စတဲ့ STD တွေ မတွေ့ရဘူး။ HIV လည်း စစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Testis ကို Ultra sound ရိုက်ပါတယ်။ Both testes are symmetrical and normal size. Both have homogeneous normal echogenicity. No Focal lesions are detected. The epididymis are normal in size and in echogenicity. No evidence of cysts seen. There isasmall amount of free fluid noted in right hemiscrotum. Comments: No focal lesions of testes detected. Mild right sided hydrocoele noted. ဒါနဲ့ ပြနေတဲ့ ဆရာက Operation လုပ်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Hydrocoele က မနာဘူးလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ လောလောဆယ်လည်း အလုပ်ရှုပ်နေလို့ Operation လည်း မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ သူတို့ ပြောသလို Hydrocoele လား။ တခြား ဘာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
A: ဆရာ့အမြင်အရ လောလောတယ် ခွဲဘို့ မလိုသေးပါ။ အစေ့နဲ့ ပေါင်ခြံနာနေတာ အရင် ပျောက်အောင်လုပ်သင့်တယ်။ Hydrocele ဆိုတာ ဘယ်တော့ ခွဲခွဲရတယ်။ Mild ဆိုတော့ ပိုလို့တောင် နေနိုင်သေးတယ်။ ဆီးအောင့်တာ၊ Exposure ရှိဘူးတာ၊ နာနေတာတွေရဲ့ အဆက်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြလက်စ ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးကုတာ ပြတ်အောင်လုပ်ပါ။ ခွဲတာကို နောက်မှလုပ်ပါ။ ကြာလို့လဲ Hydrocele က ဆိုးမလာနိုင်ပါ။ ပိုးရှိနေတုံးခွဲလို့ မကောင်းပါ။ တကယ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဝေးနေရင် ဆီးအတွက် သောက်ရတဲ့ဆေးတွေ ပြောပြရင် နောက်ဆေးကို ညွှန်လို့ရပါမယ်။
Q: ဆရာ ဆိုလိုချင်တာက နာနေတာ ပျောက်မှ ခွဲသင့်တယ်။ ကျွန်တော် ပြနေတဲ့ ဆရာဝန်က ခွဲပြီးမှ နာနေတာ ပျောက်မဲ့ သဘောကို ပြောနေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း hydrocele မှန်း မသိပါဘူး။ ပျောက်ချင်နေတာပါ။ သူက နာနေတဲ့သဘောက hydrocele ကြောင့်လို့ ယူဆနေတယ် ထင်ပါတယ်။ နာနေတာ ပျောက်အောင် ဘာဆေး စားသင့် ထိုးသင့်ပါသလဲ။
A: Hydrocele မှန်ရင် မနာပါ။ သိပ်ကြီးလာတာတောင် အလေးချိန်ကြောင့် ခံစားရမှုသာ ရှိပါတယ်။ အကြော-အစေ့ ရောင်ရင် နာမယ်။ အစေ့အခြေက လိမ်နေရင်နာမယ်။ နာနေတာရဲ့ အကြောင်းရင်း သိမှ ဆေးပေးတာ မှန်မယ်။ အများအားဖြင့် အကြော-အစေ့ရောင်တာဖြစ်တယ်။ STD လိင်ကတဆင့်ရတာ ဟုတ်-မဟုတ် ဖြစ်တယ်။ ရေးပြီးသား စာတပုဒ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Doxycycline ဒါမှမဟုတ် Ciprofloxacin ဆေး တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂ ပါတ်သောက်ပါ။ အနာ-အရောင် သက်သာအောင် Ibuprofen တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်သောက်ပါ။ ဒီဆေးကိုတော့ မနာရင် ရပ်လိုက်ပါ။ ဒီဆေးကို အစာနဲ့ သောက်ရင် ကောင်းတယ်။ “Epididymitis and Orchitis ကျား အစေ့-အကြောရောင်ခြင်း”
4/10/2010 at 20:25
Q: ကျနော့် လိင်တံ သေးနေလို့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပါတယ်။ လိင်တံကြီးအောင် ဆေးထိုးချင်ပါတယ် ဘယ်မှာ ထိုးလို့ရမလဲ။
A: “Penis enlargement ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅)” ကို ဖတ်ပါ။
4/10/2010 at 2:04 PM
Q: ကျွန်တော်အသက် (၃၅)နှစ်ပါ။ ညဘက်အိပ်ရင်းနဲ ရုတ်တရက်တရေးနိုးရင် နှလုံးက တလျှပ်လျှပ်နဲတုန်ပါတယ်။ ည ၁၂ နာရီမှ မနက် ၄နာရီအတွင်း နိုးတဲအချိန်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်ကျော်လောက် ကတည်းကပါ။ ပုံမှန်အချိန်တွေတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ တခါတလေတော့ လေအောင့်သလိုမျိုး နှလုံးဘက်က စူးပြီးအောင့် တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင် အသက်ကို အဝတောင်မရူရဲပါဘူး။ အသက် အရမ်းရူလိုက်ရင် အရမ်း အောင့်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ရူရင်းနဲ့ သက်သာသွားပါတယ်။ နောက်တခုက ဗိုက်ဆာရင် ခြေတွေလက်တွေပါ တုန်လာတယ်။ ရင်ထဲကပါ မကောင်းချင် ဖြစ်လာတယ်။ ဆေးမစစ်တာတော့ ကြာပါပြီ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အတူတူမနေပါဘူး အလုပ်က ပြည်ပမှာဖြစ်နေလို့ပါ။
A: အစာလမ်းမှာ လေနာဖြစ်တာပါ။ အဆာမခံပါနဲ့၊ အရေးပေါ်စားဘို့ အချို-ဘီစကစ် သွားလေရာ ယူသွားပါ။ နဲနဲခြင်း အကြိမ် များစားပါ။ အစာ အမျိုးအစား တူတာကို စားလေ့လုပ်တာ ကောင်းတယ်။ ထမင်း-ခေါက်ဆွဲ-ပူရီ-ပေါင်မုံ့-ပီဇာ၊ အမျိုးအစား စားနေကြကိုသာ စားပါ။ စားတဲ့အချိန်လဲ တူပါစေ။ ဆေးလဲသောက်ရလိမ့်မယ်။ ရေးပြီးသား စာ ၂ ပုဒ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“လေနာ ဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်း ဖြစ်သည်။ Peptic ulcer”
“Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း”
5/10/2010 at 23:55
Q: ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ဂျင်းနဲ့ ထန်းလျက်ဖျော်တိုက်တာ၊ ပြီးတော့ ရှမ်းပျိုမေတိုက်တာတို့က ကိုယ်ဝန်ကို ပျက်ကျစေနိုင်လားဆရာ။
A: မြန်မာဆေးနည်းတွေကို မသိတာက များတယ်။ ဒါလဲ ပါတယ်။ ဆောရီး။
5/10/2010 at 21:10
Q: မိန်းမတွေနို့ သီးခေါင်းကြီးပြီး အမဲရောင်ဖြစ်နေတာ အပျို စစ်-မစစ်နဲ့ ဆိုင်ပါသလား။
A: “Virginity အပျို တကယ်စစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၂၄)” ကိုဖတ်ပါ။
Q: ဆရာရှင့် ခါတိုင်း ရာသီလာရက်ကတော့ လဆန်း ၉ ရက်နေ့ပါ။ အတူနေမိတဲ့ ရက်ကတော့ ဒီလ ၁ ရက်နေ့ကပါ။ ကိုယ်ဝန်မရအောင် အရေးပေါ် သောက်ရတဲ့ဆေးက ဝယ်လို့ မလွယ်တာနဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်က ပြောတဲ့အတိုင်း သောက်လိုက်မိပါတယ်။ စိတ်ချရပါ့မလား သိချင်ပါတယ်။ သူပြောတာကတော့ ပြီးပြီးချင်းကို တနေ့တလုံး သောက်ရတဲ့ တားဆေးကဒ်က ဆေးကို ၄ လုံး တခါထဲသောက်ပြီးနောက် ၁၂ နာရီအတွင်းမှာ ၄ လုံး ထပ်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲလို သောက်လိုက်မိပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါ စိတ်ချရပါသလားရှင် သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါနော်။ ၁ ရက်အတွင်း သောက်တာပါဆရာ။ သောက်တဲ့ဆေးကတော့ Marvelon 28 ပါဆရာ။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:22 PM